5 HP Electric Motors amidy, 5 hp herinaratra 1725 rpm dingana tokana
5 HP Electric Motor 1725 rpm dingana tokana amidy
Mitadiava Quotation ho an'ny 5 HP Electric Motors
5 HP Electric Motors no amidy
5 hp motera herinaratra 1725 rpm dingana tokana, andalana herinaratra 5 hp lehibe ao amin'ny Sogears Industrial Supply. Ny famatsiana Sogears Industrial dia eto mba hanohanana ireo asa tanana rehetra ary fanamboarana ny fikojakojana anao. 5 hp motera herinaratra 3 fantsona, 5 hp mpanamboatra herinaratra, motor 240v 5hp sns.
Amin'ny maha mpamatsy manerantany ny 5 hp 184t frame motor single phase ary 5 hp herinaratra 120v miaraka amin'ny habaka IEC endrika Y2-112M-4, misy karazana motera 5 hp 3t motera isan-karazany ary misy motera 5 hp 184t dingana. 5 hp motera herinaratra 1725 rpm dingana tokana. Ity sokajy ity dia manolotra tsipika feno motera herinaratra compressor manomboka amin'ny motera herinaratra 240v 5hp ho an'ny herin'ny 10 ary any ambony. Marika vaovao 5 HP 230 volt compressor andraikitry ny herinaratra herinaratra. amin'ny vidiny lehibe, tongava soa hanontany anay.
Ho an'ny fambolena, ny famokarana, ny fanondrahana, ny indostrian'ny solika sy gazy na ny tobin'ny paompy munisipaly kely, ny motera elektrika 5 hp 3 dia mitana andraikitra lehibe. Izahay dia mitahiry herinaratra, magneto, motera mandeha amin'ny kodiarana maotera elektrika 10 hp, motera elektrika 5 hp ary maro hafa.
Makà motera mpanentana rivotra fanolo-drivotra ho an'ny Ingersoll rand t30 compressor, motera herinaratra 240v 5hp tsara indrindra miaraka amin'ny vidiny mora indrindra amin'ny motera 5HP North American Electric; toe-javatra tena marefo miaraka amina motera 5 hp amin'ny làlam-pandeha 30 amponga, fampisehoana avo lenta 5 hp herinaratra 3 phase 3000 RPM AC Electric Motor 3.7 KWH amin'ny vidiny ambany indrindra avy any Sogears.
Ny haben'ny moto standard, ny volan'ny 460 volontaire, ny 230 volotsika ary ny 5 hp motera herinaratra 120v - singa iray sy 3, General purpose AC, dia manome ny marika 5 hp môtô isika, mifandraisa aminay na mandefa mailaka anay ho an'ny katala PDF.
Ny ankamaroan'ny motera-by 5 hp 120v dia natao hihazakazaka amin'ny 50% mankany 100% amin'ny fanamarihana entana. Tora miandoha avo. Factor an'ny serivisy: hatramin'ny 1.15, fa ny fe-potoana 5 hp mandeha amin'ny alàlan'ny fifandonan-dàlana XNUMX hp ankehitriny dia manome fahombiazana ambony kokoa.
Mpisava lalana ao amin'ny indostria, manolotra 5 hp herinaratra 1725 rpm dingana tokana, fiara mandeha amin'ny herinaratra 240v 5hp, Motera telo Phase Electric, Motors an'ny Flour Mill ary motor motera mandeha amin'ny zotra tokana maneran-tany.
5 hp motera herinaratra 3 fatra dia voafetra amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny mpankafy mpankafy ary manome ny tsara indrindra ho an'ny famatsiana herinaratra. 5 hp motera mandeha amin'ny herinaratra dia amboarina miaraka amin'ny faharetana sy ny fahatokisana, na dia ho tonga any amin'ny 5 hp moto herinaratra 3600 rpm aza.
5 hp torovan'ny herinaratra herinaratra, 1.5 Kg-M, 1400 RPM, 132 RPM, 3 Frame, 5 Phase, SPFV miaraka amin'ny Blower, ny 56 hp moto herinaratra 5, ny haben'ny herinaratra azo atao avy amin'ny stock stock. Tanjona ny motera herinaratra XNUMX hp sy ny fifehezany, azafady azonao atao ny mifandraisa aminay amin'ny fotoana rehetra.